Vatsvakurudzi vanodzidza Dolphins havagoni kuvabvunza mibvunzo. Saka, vatsvakurudzi Dolphin vanomanikidzwa kudzidza maitiro. Vatsvakurudzi vanodzidza vanhu, Ukuwo, vanofanira kushandisa chokwadi kuti vatori edu anogona kutaura. Kubvunza vanhu mibvunzo kwave chinokosha munzanga kutsvakurudza kwenguva refu, uye digitaalinen zera zvose zvinoita uye kunoda vamwe kuchinja tsvakurudzo ongororo. Pasinei netariro kuti vamwe Ongororo vatsvakurudzi pari kunzwa, Ini kutarisira kuti digitaalinen zera iri kuenda kuva yendarama zera kutsvakurudza ongororo.
Nhoroondo tsvakurudzo ongororo chinogona nehasha kukamurwa zvitatu pindana eras, akaparadzaniswa vaviri akapikisana kuchinja (Groves 2011; Converse 1987) . Right ikozvino tiri munguva yokuchinjira pakati eras wechipiri nowechitatu, asi chokutanga uye wechipiri eras-uyewo kuchinja pakati pavo-zvinopa nzwisiso yemberi kutsvakurudza ongororo.
Mumwedzi yokutanga nguva kutsvakurudza ongororo, nehasha 1930 - 1960, kuitika zvakabudiswa zvesayenzi uye remibvunzo magadzirirwo zvishoma nezvishoma kwakaguma pakunzwisisa ano kutsvakurudza ongororo. Yaitonga kutsvakurudza ongororo yekutanga yakanga hwokuratidza nharaunda fungidziro zvakabudiswa uye chiso nechiso kubvunzurudza.
Zvadaro, mumwe muzvigadzirwa kukura-kwakapararira diffusion pamusoro landline dzeserura munyika vakapfuma munyika-pakupedzisira zvakatungamirira chechipiri yaitonga kutsvakurudza ongororo. Izvi Nguva yechipiri, nehasha kubva 1960 - 2000, akanga inozivikanwa kurongwa digit kuridza runhare (RDD) fungidziro zvakabudiswa uye runhare kubvunzurudza. The shanduko kubva pakutanga yaitonga rechipiri yaitonga kwakaguma mikuru kunowedzera kushanda zvakanaka uye zvinoderedza vari mutengo. vaongorori vakawanda vanoona ichi chechipiri nguva sezvo yendarama zera kutsvakurudza ongororo.
Zvino, mumwe kukura-the rwokugadzirwa digitaalinen zera-pakupedzisira kutiunzira wechitatu munguva kutsvakurudza ongororo. Uku kuri rinosundwa zvose kusunda uye kudhonza zvinhu. Muchikamu, vatsvakurudzi vari kumanikidzwa kuchinja nokuti nzira kubva rechipiri yaitonga vari kuputsika digitaalinen zera (Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Somuenzaniso, vakawanda misha havana landline nhare uye vasiri norudaviro prices-vakabvunzwa vari vakatora asi havabatanidzwi kuongorora-vave vachiwedzera (Council 2013) . Mawa vane kuparara uku yechipiri-yaitonga anouya zvakabudiswa uye nokubvunzurudza, pane kuwedzera Kuwanikwa guru mashoko anopa (ona Chitsauko 2) kuti sokuti kutyisidzira kutsiva kuongorora. Kuwedzera kune izvi kusunda zvikonzero, varipo Mukaverenga zvinhu: wechitatu yaitonga Nzira kupa zvisingatendeseki mikana, sezvo Ndichamuratidza kuti muchitsauko chino. Kunyange zvazvo zvinhu zvisina zvachose kugadziriswa asi ndinotarisira kuti wechitatu yaitonga kutsvakurudza ongororo achapiwa inozivikanwa asiri fungidziro zvakabudiswa uye kombiyuta-raitongwa kubvunzurudza. Uyezve, kunyange zvazvo kwokutanga eras vakanga inozivikanwa nzira dzavo zvakabudiswa uye nokubvunzurudza, Ini kutarisira kuti wechitatu yaitonga kutsvakurudza ongororo vacharaswa inozivikanwa nokuda linkage pakati kuongorora pamwe guru mashoko manyuko (Table 3.1).
Table 3.1: Three eras kutsvakurudza ongororo. chitsauko chino ichanyanya nezuva retatu yaitonga kutsvakurudza ongororo: isiri fungidziro zvakabudiswa, kombiyuta-achiita kubvunzurudza, uye anoona chokuita mamwe mashoko.
First yaitonga 1930 - 1960 Area fungidziro zvakabudiswa Face nechiso Mira-oga kuongorora
Second yaitonga 1960 - 2000 Random digit kuridza runhare (RDD) fungidziro zvakabudiswa runhare Mira-oga kuongorora
Third yaitonga 2000 - chipo Non-fungidziro zvakabudiswa Computer-wakawanda Surveys chokuita mamwe mashoko
Kuchinja pakati eras kutsvakurudza ongororo rechipiri uye rechitatu asina zvachose kumeso, uye mave vanotyisa nharo pamusoro sei nevatsvakurudzi vanofanira mberi. Ndichitarira shure pamusoro kuchinja pakati rokutanga uye rechipiri eras, ndinofunga uriko chinokosha njere kwatiri zvino: pakutanga haisi mugumo. Ndiko, pakutanga vakawanda nzira yechipiri-yaitonga vaiva AD-hoc uye havana kushanda zvakanaka. Asi, kuburikidza nebasa rakaoma, vaongorori zvinetso izvi, uye wechipiri-nguva Nzira pakupedzisira zvaiva nani kupfuura kutanga-munhambo Nzira. Somuenzaniso, vaongorori vakanga vachiita runhare kurongwa digit kuridza runhare kwemakore akawanda Mitofsky uye Waksberg asati akatanga kurongwa digit kuridza runhare zvakabudiswa nzira yakanga yakanaka inoshanda uye yokungotaura zvivako (Waksberg 1978; Brick and Tucker 2007) . Saka, hatifaniri kunyonganisa mamiriro rechitatu-yaitonga Nzira yavo yokupedzisira zvaitika. Nhoroondo tsvakurudzo ongororo rinojekesa kuti munda yakavepo rinosundwa kuchinja zvemichina uye nzanga. Hapana nzira kumisa shanduka. Asi, tinofanira kurigamuchira, apo kuramba kuzochera uchenjeri hunobva ambotaurwa eras. Kutaura zvazviri, ndinotenda kuti digitaalinen zera achava kunakidza zera asi nokubvunza vanhu mibvunzo.
Zvakasara chitsauko anotanga nharo kuti guru mashoko manyuko haazorambi kutsiva ongororo uye kuti zvakawanda mashoko inowedzera-kwete zvinoderedza-kukosha kuongorora (Section 3.2). Sezvo nokukurudzirwa, Ndichaenda muchidimbu yose ongororo kukanganisa framework (Section 3,3) kuti yakazokudziridzwa munguva eras maviri pakutsvakurudza ongororo wokutanga. mugwaro iri rinoita kuti tinzwisise nzira itsva kumiririrwa-zvikurukuru, isiri fungidziro ivhu (Section 3,4) -uye nzira itsva kuti kuyerwa-zvikurukuru, nzira itsva hwokubvunza mibvunzo kuti vakabvunzwa (Section 3.5). Pakupedzisira, Ndichaenda kutsanangura zviviri kutsvakurudza templates nokuda unobatanidza ongororo Data rakakura mashoko zvinyorwa (Section 3,6).